Kulan wada tashi looga hadllayay dib u eegista Dastuurka oo Muqdisho ka dhacay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Kulan wada tashi ah oo ay soo wada qaban qaabiyeen Wasaaradda Caddaladda iyo Arrimaha Dastuurka iyo xafiiska Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa looga hadlay dib-u-eegida Dastuurka KMG ah ee Dalka, waxaana kulankaas ka soo qayb galay Madaxweynaha, Guddoomiyaha Baarlamaanka, Ra’iisul Wasaaraha, Gudigga madaxa banaan ee dib u eegista Daastuurka, Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada, Agaasimayaal ka kala socday Wasaaradaha iyo mas’uuliyiin kale.
Wasiirka Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo ka hadlay xafladii furitaanka ayaa sheegay in dowladda ay ka go’an tahay in la dadejiyo dib u eegis dhamaystiran oo lagu sameeyo Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya.
“Waxaa dib-u-eegista Dastuurka loo xil saaray Gudigga madax banaan oo ka kooban 5 xubnood Wasaaraduna waxay lagarab taagan tahay taageero nooc kasta ah” ayuu yiri Wasiirku oo dhanka kale xusay in magaacabista gudigaan ay ka heleen taageero buuxda Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, islamarkaan dhaqaale ahaan iyo niyad ahaaba u taageeraan dhamaystirka Dastuurka Dalka, waxaana Wasaaraddu cadaynaysaa in aysan wax faro galin ah ku samaynayn howsha loo xilsaaray Guddiga Dastuurka.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Cabdullahi Goodax Barre ayaa dhankiisa bogaadiyey howsha u bilaabatay Gudigga iyo sida baarlamaanka Soomaaliya u ansixiyey si ay u guda galaan waajibaadka shaqo, Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in looga baahan yahay wasaaradda Cadaaladda iyo dastuurku in ay qaadato kaalinteeda loona fududeeyo gudiga wixii sharciyad ah oo ay u baahan yihiin, shaqaale xirfadlayaal ah oo la shaqeeya iyo dhamaan wixii u sahli kara in shaqadooda ay si wanaagsan u gutaan.
Xiritaankii xaflada ayaa waxaa hadal kooban oo ay ku dheehan tahay guubaabo iyo khibrad ka jeediyey Guddoomiyaha Baarlamaanka Prof, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo runtii qayb weyn ka soo qaatay hirgelinta Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya.
“Dastuurka Dalku wuxuu soo maray maraaxil kala duwan, maantana waxaa furnay xaflada lagu daahfuray sidii dastuurka dalka looga saari lahaa KMG, waxaana Wasaaraddu u xilsaartay shaqadaas Aqoonyahano Soomaaliyeed oo shacab iyo dowladba aan kalsooni ku qabno, waxaan gudigga ka rajaynaynaa in ay si caddaladi ku jirto u gutaan shaqaadooda. shacabka Soomaaliyeed waxay ka dhursugayaan sidii dalka loogu samayn lahaa Dastuur dhamaystiran, waxaana ilaahay subxaana watacaala uga baryeeynaa inuu idinla garab galo shaqada weyn ee laydin xilsaaray, waxaan balan qaadaynaa in Baarlamaanku idinla garab istaagayo wixii taageero ah oo aad u baan tihiin” ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanku.
Galmudug oo Muqdisho u dirtay ciidamo ku biiraya Kumaandoosta